सगरमाथाको उचाई नाप्ने काम १० प्रतिशत मात्र बाँकी
काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको हालै सम्पन्न दुईदिने नेपाल भ्रमणपछि जारी भएको संयुक्त वक्तव्यको आठौं बुँदामा सगरमाथाको उचाई संयुक्त रुपमा घोषणा गर्ने भन्ने एउटा बुँदा समेत रहेको छ । नेपालले...
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण त्रिदेशीय सहकार्यको आधार बनेको छ । उनी भारतको ममिल्लापुरममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अनौपचारिक वार्ता गरी नेपाल आएका थिए । भारत शब्द उल्लेख नगरी...
समाचारपत्रपत्रिकाबाट १७ औं अनशन बस्ने डा. केसीको चेतावनी
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्राडा गोविन्द केसीले १७ औं अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले विगतमा आफूसँगको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन नगरिए भाइटिकाको भोलिपल्ट अर्थात् कार्तिक १३...
गृहमन्त्रीद्वारा सुरक्षाकर्मीलाई धन्यवाद ज्ञापन
काठमाडौं । गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले सुरक्षाकर्मीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको क्रममा सुरक्षाकर्मीले योगदानको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त गरे...
जीप दुर्घटना हुँदा तीन जना घाईते
सल्यान । जीप दुर्घटना हुँदा तीन जना घाईते भएका छन । बाग्चौर नगरपालिकाको थारमारेबाट दार्मा गाउँपालिकाको फारुला जाँदै गरेको लु २ च १६७२ नम्बरको जिप आइतबार बेलुकी फारुला नजिकै दुर्घटना हुँदा तीन जना घाइ...
महरालाई मंगलबार मात्रै अदालत पेश गर्ने
काठमाडौं । यौन हिंसाको आरोप लागेका निर्वतमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई मंगलबार मात्रै अदालतमा पेश गरिने भएको छ । संसद सचिवालयको कर्मचारी रोशनी शाहीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका महरालाई मंग...
हुन्थे स्वाभाविक नै हो सामान्य घरको काण्ड या त देशमै फैलिन थाल्यो अचेल चर्को काण्ड ! कति जन्मन सकेका हुन यहाँ मान्छे अपराधी दिनकै देखिन थाले के भयो ठुलाबडा नै बलात्कारी ! देशकै गर्छन् सरकारकै माना...
कांग्रेस सांसद आलम निलम्बित
काठमाडौं । हत्याको अभियोग लागेका कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलम सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका छन । सोमबार संसद सचिवालयले सुचना जारी गर्दै सांसद आलम निलम्बनमा परेको जानकारी गराएको हो ...
काठमाडौं । समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठक आज(सोमबार) दिउँसो १ बजे पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बैठक बस्ने बस्दै छ। बैठकमा पार्टीको समायोजनबारे समीक्षा हुनेछ भने समायोजनको कामलाई पूर्णता...
खुकुरी प्रहार गर्ने एक जना पक्राउ
दाङ । दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका-६ पहाडीपुर बस्ने ३० वर्षीय प्रकाश थापालाई धारिलो हतियार खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा एक जना पक्राउ परेका छन । पक्राउ पर्नेमा सोही ठाउँ बस्ने २२ वर्षीय निम ...
नेपाल-भारत संयुक्त उर्जा बैठक आजबाट भारतमा
काठमाडौं । नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको सातौँ बैठक सोमबारबाट शुरु हुँदै छ । दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, इनर्जी बैंकिङ लगायतका विषयमा छलफलसहित सहमति जुटाउ...
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै १६ औं पटकसम्म आमरण अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई पून: दिनको अल्टिमेट दिएका छन । ११ दिन भित्र विगतमा राखेका माग पूरा हुनु पर्ने भन्दै डा. केसीले...
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत महिना सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै जाँदा आवि २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयनको स्थिति पत्याउनै नसकिने किसिमको निराशाजनक देखिएको छ। उ...
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका वरिष्ठ हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ चिकित्सक गोविन्द केसीले आज(सोमबार)देखि सेवाबाट अवकास पाउँदैछन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्द...
चीन विभाजन गर्न खोज्ने प्रयास ‘किचिएका शरीर र भाँचिएका हड्डीहरू’ मा टुङ्गिने छ – राष्ट्रपति सी
एजेन्सी । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले हङ्‍कङमा जारी विरोधप्रदर्शनलाई सङ्केत गर्दै चीन विभाजन गर्न खोज्ने प्रयासलाई दमन गरिने कडा चेतावनी दिएका छन्। चीनको सरकारी टेलिभिजन सीसीटीभीका अनुसार नेपालको ...